लोक गायक धर्मराजसँग काठमाण्डौदेखी दिक्तेलसम्म….::समायोजन खबर
लोक गायक धर्मराजसँग काठमाण्डौदेखी दिक्तेलसम्म….
हामी त लै लै.. दिक्तेल वजारको
एका विहानै मेरो टेलिफोनको घण्टी बज्यो । ‘लौ उठ है भाई जाउ……।’ हत्तपत्त निद्राबाट ब्युंझिएर हातमुख धोएर माथिल्लो तल्लावाट खुट्टा लर्बराउदै तल बहुप्रतिभाका धनी धर्मराज पोखरेल भए सामुन्ने पुगे । छट्पट् गर्दै, फ्रेस भयौ, अब हिड्नुपर्छ, विहान ४ वजेको आवाजले म झस्किए । काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–८ गोल्फुटारमा ड्राईभर समयमा नआउदा उनी छटपटीएका रहेछन् । बहुप्रतिभाका धनी पोखरेल ईन्जिनियर, राजनीतिकर्मी, मोडल, रचनाकार, समाजसेवी त हुन् नै । तर, त्यो भन्दा अर्को प्रतिभाका धनी पोखरेल लोक गायक हुन् ।
लोक गायक धर्मराजसँग यात्रा सुरु भयो । स्कारपीयो गाडीको आरामदायी सिटमा बसेर हामी गफिन थाल्यौ, ‘अब सुरु भो हैन त यात्रा’ मैले भने । ‘सुरु भो, सुरु भो’ उनले भने । काठमाण्डौवाट हामी खोटाङका लागि हिड्यौ । वाटोमा केही मानिसहरु हामीसँगै गाडी चड्ने रहेछ । अन्य मान्छेहरु गाडीमा पस्नुभन्दा पहिला मैले गीत सुन्ने निधो गरे । पछाडी म उनी अगाडी, ल तपाईको गीत बजाउनुहोस, तपाईको मात्र गीत सुन्ने आज, हो त ल भन कुनबाट सुरु गरौं । मैले भने, भर्खरै खोटाङ र सोलुखुम्बुमा छायाङकन गर्नुभएको गीत सुनौ ।
अब भने, गाडीभित्रको शुन्यता हट्ने भयो, बाहिर भने, चरीहरुको चिरबिर आवाज थियो नै गाडीभित्र भने, शिवसंगम राईको लय संगीत, धर्मराज पोखरेलको शब्दमा रहेको हामी त लै दिक्तेल बजारको लोकगीत घन्किन थाल्यो । काठमाण्डौ शहरको विभिन्न चोकबाट उनका साथीहरुलाई गाडीमा राख्दै राख्दै हामी कोटेश्वर नाका कट्यौ ।
१९ वटा लोकगीत बजारमा ल्याएका लोक गायक पोखरेलले गीत लेख्ने क्रममा भावुक भएर आफू नै तीन पटक रोएको गीत सुनाउन चेष्टा गर्दै थिए । रिमोटको साहारामा गाडीमा गीत खोज्दै थिए । आश्रममा बाउआमा रुदै धरर… भन्ने गीत बज्न थाल्यो । गाडीमा भएका खोटाङ बुईपाका राजेशपायल राईका दाई किशोर राई, राजनीतिकर्मी, समाजसेवी निशान राईले गीतको खुबै प्रशंसा गरे, उनलाई बधाई तथा आगामी दिनको शुभकामना पनि दिए । लोक गायक पोखरेलले पछिल्लो अवस्थामा छोराछोरीले आफ्ना बुबाआमालाई गर्ने व्यवहार हुवहु गीतमा उतारेका गीतमा सबैजना भावुक भए । छोराछोरी कारमा सरर.. बुढाबुढी बाउआमा रुदै धरर…भन्नेमा सबैले सर्मथन जनाए ।
क्रमशः गती सुन्दै गाडीमा हुईकियौं । खोटाङ र ओखलढुंगाको सिमाना जयरामघाटको वारेमा वर्णन गरिएको जयरामघाटैमा, धारापानीमा, दुई दिने चोला गीत सुन्दै सुन्दै भक्तपुरको साँगामा आएपछि प्रसंग अलिकती बद्लियो । लोक गायक पोखरेल राजनीतिकर्मी भएकाले उनी देशको बारेमा पनि त्यतिकै चिन्तित छन् । अहिलेको राजनीति कमाउ धन्दा बनेको छ । आवेगमा आएर उनी राजनीतिभन्दा नि राजनीति गर्नेसँग रिसाए । नाम नभन्ने शर्तमा उनी सुनाउदै थिए । ‘खोटाङका एकजना मेयर छन् । उनले, वर्ष दिन वित्यो, ऋण कसरी उकास्ने भन्नेसम्म कुरा गरे हौ ।’ उफ….
गाडीमा गीत चेन्ज हुदै थियो । फेरी उनको फुलै फुलको माला गाँसेर भन्ने गीत घन्किन थाल्यो । अब, भने हामी काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा एकछिन चिया पिउने निधोले गाडी पार्किङ ग¥र्यौ । बाहिर सडकमै उभिएर चिया पिउदै गर्दा तत्कालिन खोटाङका डिएसपी लोकदर्शन थापासँग भेट भयो । चिनेका वाहेकले परिचय गरे, एकैछिनमा सबैजना नजिकी भए । चिया पिउदै गर्दा राजनीतिकर्मी, समाजसेवी निशान राईले ‘पोखरेलको छोरा कसरी गायक भए ।’ मजाक गरे । उनी मुस्कुराए मात्रै ।
चियापानपछि लगभग सबैजना जम्मा हुनुपर्ने मान्छे आए । अनि सरर.. हामी गाडीमा हुईकिन थाल्यौ । तिमी कहाँको हाम्रो भेट दैवले जुराको र बुईपा, राजापानी लगायतका स्थानको सम्पुर्ण ठाउँको नाम समेटेर तयार पारीएकोे ‘मध्ये बसेरी तिम्लाई छोडर जानु कसरी…..।’ गीत सकिएसँगै हामीले काभ्रपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकालाई छोड्यौ ।
वारीपारी डाडाँकाडा अनि नागवेली पिच बाटोमा हामी सरर….हुईकियौं, गाडी आफ्नै स्पीडमा थियो । हामी आफ्नै धुनमा, गाडीमा लाखौ हजारमा, शंका लागे गाउँघरमा सोध्न सकिन्छ, फेरी भेटौला, गैरी लसुन, माया संगै वसुन गीतसँगै हामी सिन्धुली छोडेर उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिकाको घुर्मी बजारमा आएर खाना खान बस्यौ ।
लगभग ४० मिनेटको बसाईपछि हामी खोटाङका लागि छुट्यौ । अब भने, लोक गायक पोखरेलको रोईला भाका सुन्नमा हामी तयार भयौ । उनी पुर्वेली भए पनि काठे भाका, रोईला भाका गाउनमा पनि माहिर छन् । ‘मुसु मुसु हाँस्यौं’ रोईला भाका सँगै हामी ओखलढुंगाको हर्कपुर, हिलोपानी ओरालो लाग्यौ । अब हामी खोटाङ र ओखलढुंगाको सिमाना जयरामघाट पुग्दै थियौ । अब ‘जयरामघाटैमा सुनौ’ मैले भने, रिमोटको साहाराले उनले गीत बजाए । जयरामघाटैमा गीतको सुरमा दुधकोशी नदी र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बाहुनीडाडाँ, डिकुवाको डाडाँहरु नियाल्दै हामी खोटाङ जिल्ला छि-र्यौ ।
लोकगायक पोखरेलको १९ वटा लोकगीतमा हामीले १५ वटा गीत सुनेर हलेसी महादेवस्थान आईपुग्यौ । सुरुवातमा भनिए झै लोक गायक तथा ईन्जिनियर पोखरेल आफ्नो ईन्जिनियरीङ काममा व्यस्त भए । कोहीले हलेसी मन्दिरको दर्शन गरे । यताउता गर्दै अर्खौले आईपुग्दा झमक्कै साँझ प¥र्यो । सबैजना अब भने, गाडीभित्रै नाच्ने रहर गरे । काठमाण्डौदेखी हिड्दा सुन्दै आएका पोखरेलको केही गीतमा सबै नाच्न थाले । गायक पोखरेल भने, स्पीकरको आवाजसँगै आफ्नो गीत गुनगुनाउदै थिए । सडक दायाँवायाँममा भएका घरका मान्छेहरु उज्यालोले देखेसम्म अचम्म मानेर हामीलाई हेरेको देखिन्थ्यो ।
काठमाण्डौवाट विहान ४ वजे हिडेका हामी करीव राती ८ वजे दिक्तेल आईपुग्यौ । दिक्तेलसम्म नै लोकगायक धर्मराज पोखरेलको गीत गुन्जिरहेको थियो । लोक गायक पोखरेललाई विमा कुमारी दुरा, मेलिना राई, देबी घर्ति, मिलन अमात्य, निसा कार्की लगायतले गीतमा साथ दिएका छन् । सवैले भन्दै थिए । ‘धर्मराजसँग अवस्मरणिय यात्रा भो ।’
तस्विर : लोक गायक धर्मराज पोखरेल, तस्विर चिसाङ शेर्पा, २०७५ असोज १३ बिहान ११ : ५४ मा प्रकाशित